Tech's Yepamusoro 3 Mipiro kune Hutano hwehutano - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Salesforce Hutano Cloud
Salesforce inyanzvi yekubuda mu nezveutano. Yakawedzera simba, kunyanya mushure me COVID-19, uko nyika yakachinjira kumasevhisi edhijitari, isina sarudzo yakajeka. Nekupa varwere mukana kune yakakosha hutano ecosystem, ivo vanogona kuve vanoshinga kutora chikamu mune yekuchengetedza maitiro vachishandisa Salesforce hutano gore.
Salesforce Hutano Cloud inopa nezveutano nyanzvi uye mabhizinesi ezvehutano maonero akazara enharaunda yekutarisira, ichivabvumidza kuti vataure zvirinani uye vateedzere data revarwere.
Kune akawanda maturusi akaita seACCELQ ayo anofambisa vashandisi kuti vawedzere akasarudzika hutano hwevhisi masevhisi. Zvisinei, unogona enda kuburikidza nevesevyforce automation zvishandiso kuenzanisa kuti uone iyo inokodzera zvaunoda.
Varwere havagone chete kuwana ruzivo rwakakosha nezvezviratidzo, maitiro, kuongororwa, uye kurapwa, asi ivo vanogona zvakare kusimudzira ruzivo rwavo rwehutano nekutaurirana navanachiremba mune chaiyo-nguva uye kuwana mukana wekutarisira mashedhi uye nzira dzekuvandudza.
Tiri kurarama munguva apo tekinoroji yakashandura chinenge zvese (for good, for sure). Kubva pamabasa akakosha sekuenda kunotenga kunotenga hurukuro yemunhu-wega neyehunyanzvi, hutano hwekubata hwave chinhu chikuru chinotinyaradza.
Kunyangwe isu tichiwanzoona izwi rekuti 'tech' kana 'innovation' richishandiswa muzvikamu zvakaita sezvemari kana bhizimisi, zvirokwazvo yakaita nzvimbo mukati nezveutano naizvo. Tech yakabatsira nezveutano vanopa kuti vafambise mberi masevhisi avo, sekuwana mushandisi dhata nekukurumidza uye nenzira kwayo nevekutengesa hutano masevhisi masevhisi kana kushandisa AI kuti ive neinotsanangurwa gwara.
Asi mubvunzo apa ndewekuti: Kubata kwetekinoroji kwakanyatso kugadzirisa murwere here nezveutano zvakaitika? Ngatitarisei pazvinhu izvo zvatingatarise semupiro kune wemurwere nezveutano.
Telemedicine inoshandisa matekinoroji ekutaurirana kubvumidza vashandi vezvehutano kupa kiriniki kune varwere kubva kure. Tinogona kutsvaga midzi ye telehealth kudzokera kunzvimbo yakakura, yakaoma yemaruwa ekuAustralia.
NASA yakapayona telemedicine muma1960s nekuisanganisira kure kure yekutarisa michina yevaastronomasi zvipfeko zvekutarisa hunhu uye hutano hwepfungwa. Zvisinei, hazvisi kusvika kuma1980 izvo telehealth rakaona kushandiswa kwaro kwenyanzvi apo MedPhone yakagadzira chishandiso chakashandisa chetsika nhare sevhisi kurapa varwere vaida kumutsidzirwa kwemoyo vari kure.
Kuenderera mberi kweterevhizheni kushandurwa kwemakumi maviri emakore akatevera kwakagadzira nzira yemazuva ano telehealthcare services. Vanachiremba nhasi vanobvunza varwere uye vanotaurirana nenyanzvi vachishandisa nzira dzakasiyana siyana senge foni, chat, email, uye teleconferencing.
Vakavaka netiweki inosanganisira vanopfuura zviuru zvitatu vanogadzira mahedheni uye vanogamuchira redhiyo kuti vashande musika uyu, vachibvumidza zvinoonekwa uye chekutanga chikuru telehealth network.
Iyo Yakagoverwa Ledger Technology (blockchain)
kunyange dhata analytics inogona kutora kukosha kubva kunzvimbo dzinoshamisa zvikuru, blockchain ine mukana wekuchinja kukosha kweiyo data.
The blockchain, inozivikanwawo sedhairekitori yakagadzwa, ine hunhu huviri hwakakosha hunosiyanisa neyakajairika data seti.
Hapana munhu mumwechete ane kana anotonga iyo blockchain. Asi, mumwe nemumwe anenge achitora chikamu anedzidziso yavo, uye ruzivo rwutsva runofanira kutenderwa nevose vanotora chikamu.
Isingachinjiki dhata inobata: Kamwe bhuroka re data rakazvipira kune iyo blockchain, haigone kuchinjwa. Semagumo, blockchain inopa inodonhedza-chiratidzo chinyorwa icho inodzivirirwa nevatambi vakaipa.
Matunhu akati wandei anovimba nezvakaomesesa, kuvimba-kwakavakirwa zvibvumirano, senge mari, maindasitiri ekuparadzira ma network, uye simba, vafunga kushandisa blockchain zvikumbiro nekuda kwezvikumbiro izvi chibatiso namano.
Nekufambira mberi kwetekinoroji kuri kuonekwa pasi rose, chikamu chehutano chave chikuru chekuchinja. Marekodhi echipatara, vatengesi vezvishandiso zvekurapa, uye manejimendi ekuongororwa kwekiriniki mienzaniso yezviitiko zvakafanana zvekushandisa zvakasimbiswa ne nezveutano industry.